site ha na 18-09-20
Kedu ihe diamond dị oke ọnụ n'ụwa? Mgbe ọ gaghị ekwe omume ịchọpụta uru ọ bara, ikekwe anyị nwere ike ịlele ọnụahịa nke mgbaaka diamond site na diamond dị oke ọnụ na nke kachasị ọnụ ahịa n'akụkọ ihe mere eme. Ndị a kere a diamond akụkọ ihe mere eme mgbanaka na akụkọ ihe mere eme nke au ...
Diamond Jewelry Market, asọmpi n'etiti teknụzụ na ịhụnanya
site ha na 18-07-02
Mkpụrụ diamond mepụtara nke ọma dị ka afọ ndị 1950. Otú ọ dị, ruo n'oge na-adịbeghị anya, mmepụta ihe nke ịkọ diamonds malitere ịbelata nke ukwuu karịa ọnụ ahịa nke diamonds. Ọganihu sayensị na teknụzụ kachasị ọhụrụ emeela ka nrụpụta nrụpụta belata o ...
Mgbe ememme oge opupu ihe ubi na-abịa, gịnị ka a ga-ezigara ndị TA iji mee ya obi ụtọ ọbụna ọchị n'ihu ya? Lingling na-agwa gị na ọla dị oke ọnụ ahịa zuru ezu. Ihe ọla dị iche iche pụtara na-anọchi anya ịhụnanya nzuzo okwu dị iche iche. You nwere ike ịkọ ma TA nwere ike ịkọ eziokwu? Olu - Whụnanya W ...
Ihe bara nnukwu uru zoro ezo okwu nzuzo ndị a Ọ nwere ike ịkọ ya?
site ha na 18-04-15